Daawo Xakiimul Ummah Oo Jeediyay Kalimad Cusub. – Calamada.com
Daawo Xakiimul Ummah Oo Jeediyay Kalimad Cusub.
Mu’assada Ass-saxaab ee garabka warbaahineed ee Mujaahidiinta Al-qaacidah ayaa baahisay kalimad cusub uu jeediyay Allaah ha dhowra Sheekha Waalidka Xakiimka ah ee Dr Ayman Al-dawaahiri Amiirka guud ee Mujaahidiinta Al-qaacidah.
Kalimadda oo cinwaan keedu yahay waxaa la daawan karaa oo la dhageysan karaa muddo ku dhaw Nus Saac waxa uuna sheekha sigaar ah kalimaddan uga hadlay siyaasadaha diinka baxa ah ee ay ku dhaqaaqeen mas’uuliyiinta dowladda Sacuudiga.
Amiirka ayaa si waafi ah uga faallooday sida hoggaamiyaasha dabadhilifyada Carabta ee dhulka Jaziiradda ay ugusii dhowaanayaan Yahuudda ayna ugu rucleynayaan in ay umadda ugacan geliyaan cadowgeeda asalka ah.
Sheekh Dr Ayman Al-dawaahiri ayaa dhaxal sugaha Sacuudiga Murtad Max’med Bin Salmaan ku tilmaamay Ataatorkiga carabta isagoo lameel dhigay mustafa Kamaal Ataatorkigii qarni ka hor dowladda calmaaniga ah ka dhisay wadanka Turkiga.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 18-04-1440 Hijri.
Next: Qaraxyo Ka Kala Dhacay Gobalada Baay Iyo Jubbada Hoose.